चितवनमा आगामी भदौंको अन्तिम हप्ता अनमोल साँझ हुने
१५ जेठ २०७७, बिहिवार | May 28, 2020 | 10:01:48
नेपालमा आज एकैदिन १२९ जनामा कोरोना पुष्टि,यो संगै संक्रमितको संख्या ९ सय नाघ्यो
आजदेखि तीन दिन दिपावली गरी गणतन्त्र दिवस मनाउन गृहको अनुरोध
किन रोकियो संविधान संशोधन विधेयक? कसले गर्यो चलखेल?
By synergyfm on	 August 2, 2018 चितवन सेरोफेरो, मनोरञ्जन
चितवनमा आगामी भदौंको अन्तिम हप्ता अनमोल साँझ हुने भएको छ । मोनिका ईन्टरनेशनल ग्रुप काठमाडौंको आयोजनामा आगामी भदौं २३ गते नारायणगढस्थित क्याम्पाचौरमा अनमोल साँझ हुन लागेको हो ।
आयोजक मोनिका ईन्टरनेशनलले अनमोल साँझ २०७५ बारे जानकारी दिन आज (बिहिबार) यहाँ आयाजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत उक्त जानकारी दिईएको हो ।
कार्यक्रममा चर्चित नायक अनमोल केसीले आफै गित पनि गाउने भएका छन् । कन्र्सटमा नायिका प्रियंका काकी, भेटेनलगायत राष्ट्रिय तथा स्थानीय व्याण्डहरुको विशेष प्रस्तुती रहने मोनिका ईन्टरनेशनल गुप काठमाडौंका अध्यक्ष कमल जिसीले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नायक केसीको नृत्यसंगै दुई वटा गीत प्रस्तुत हुनेछ । अध्यक्ष जिसीका अनुसार अनमोलले स्टेजमा के यो माया हो र तुरुरुरु बोलको गीत पनि गाउने छन् । उनको लाईभ नृत्य समेत दर्शकहरुले हेर्न पाउने छन् । नेपाली चलचित्रमा छुट्टै पहिचान बनाएका साथै युवा पुस्ताको मनमा बस्न सफल नायक अनमोलको यो पहिलो अफिसियल कन्सर्ट टुर हो ।
नायक अनमोलसंगै नायिका प्रियंका कार्कीको पनि विशेष प्रस्तुती रहनेछ । उनले ६ वटा गीतमा नृत्य समेत गर्ने मोनिका ईन्टरनेशनल ग्रप काठमाडौंका अध्यक्ष जिसीले जानकारी दिए ।
स्थानीय आयोजकको रुपमा द सिल्ड चितवन रहेको छ । चितवनमा आयोजित कन्सर्टको सबै व्यवस्थापन द सिल्डले नै गर्ने अध्यक्ष विनय लामाले बताए । अनमोल साँझ दिउँसो २ बजेदेखी साँझ ८ बजेसम्म चल्नेछ ।
चितवनमा करिव १० हजार दर्शकको उपस्थिति रहने आयोजकले विश्वास लिएको छ । दर्शकको सहजता र सर्बसाधरण दर्शकलाई प्रवेशमा सहज होस् भन्नका लागि २०० रुपैयाँदेखिको टिकट व्यवस्था गरिएको आयोजक मोनिका ईन्टरनेशनल ग्रुप काठमाडौंले जनाएको छ ।
अग्रिम टिकट खरिद गर्नेले यो मूल्यमा टिकट पाउने छन् भने सोही टिकट कार्यक्रमको दिन ३०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै ५०० रुपैयाँको टिकटमा स्न्याक्स, एक हजारको टिकटमा डिनर, ३ हजार रुपैयाँको टिकटमा नायक अनमोललगायतका कलाकारसंग बसेर डिनर र स्टेजको पहिलो भागमा बसेर कार्यक्रम हेर्न पाउने ब्यबस्था गरिएको मोनिका ईन्टरनेशनल ग्रुप काठमाडौंका अध्यक्ष जि.सी. ले बताए ।
। ३ हजार रुपैयाँको टिकट अनलाईनबाट बुकिङ खुल्ला गरिएको भन्दै हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ३ हजारको टिकट बुकिङ गर्ने दर्शक सबैभन्दा बढि चितवनको रहेको अध्यक्ष जि.सी.ले बताए ।
देशका चार मूख्य शहरबाट सुरु हुने यो कार्यक्रम भदौं ९ गते रुपन्देहीको बुटवलबाट सुरु भई भदौं १६ गते कास्कीको पोखरा र भदौं २३ गते चितवन हुँदैं भाद्र २७ गते झापाको विर्तामोडमा हुँदैछ ।
अझै तीन दिन मेघगर्जन, हावाहुरीसहित वर्षा हुने मौसमविदको अनुमान:सजक रहन आग्रह
चितवनमा क्यान्सरको उपचारका लागि आएका बिरामी र कुरुवाको बिचल्ली